U-Khasan Baysanguroz ujongene noChristopher Ousley nge-25 kaSeptemba
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	IBaysanguroz vs Ousley, UChristopher Ousley, Khasan Baysanguroz, WBA	0
Khasan Baysanguroz vs UChristopher Ousley
Ibala laseTottenham Hotspur eLondon, eNgilani 25/9/21
Khasan Baysanguroz kwaye UChristopher Ousley Iza kuba nomlo kwenye yezona milo zinomdla ze-Joshua-Usyk undercard ngoMgqibelo, nge-25 ka-Septemba. Bobabini bazongena eringini kwibala lezemidlalo laseTottenham Hotspur eLondon ukuphikisa itayitile ye-World Boxing Association (WBA) Intercontinental Middleweight.
Umlo ubalulekile kubo bobabini abo balwayo, kungekuphela nje kwithuba lokugcina ibhanti yengingqi, kodwa kunye nethuba lokuzibonakalisa ngokuhlwa okukhulu njengeyona ntshatsheli ye-WBA u-Anthony Joshua kunye nomceli-mngeni wakhe u-Oleksandr Usyk.
U-Baysangurov unamava kwicala lakhe kwaye uza kumlo ophumeleleyo othe ngqo. Umntwana oneminyaka engama-24 uneminyaka esibhozo yamava obuchule kwaye ujongane nabachasi abalungileyo. Ngapha koko, unamava okulwa isihloko xa wayejamelene noRob Brant kwi2019, ekuphela kwelahleko yomsebenzi wakhe.
U-Ousley, oneminyaka engama-30, akazange ajongane nomchasi kolu didi kodwa unerekhodi engoyiswanga kunye nenani elifanelekileyo lokunkqonkqoza ngetyala lakhe njengepuncher elungileyo. Ngoku kufuneka azibonakalise ekulweni le klasi.
IBaysangurov ineempumelelo ezingama-21, ilahleko enye kuphela kunye nokubetha okungama-11. U-Ousley uphumelele i-12 kunye ne-9 knockout kwikhondo lakhe lomsebenzi.
UMikey Garcia ujongene noSandor Martin eFresno, e-USA nge-16 ka-Okthobha	UJosh Taylor ufuna ukuvala unyaka nge-bang ngokuchasene noJack Catterall
UJamel Hering & Shakur Stevenson balungiselela ukungqubana kwesihloko se-WBO sangoMgqibelo
U-12-0 u-Rosalinda Rodriguez utyikitya ngokunyusa amaPunch
UYesica Bopp kunye noJohana Zúñiga balinganisa ubunzima phambi komlo wabo weWBA
Oscar Rivas vs. Ryan Rozicki Bridgerweight iintsimbi zekhadi evela Canada